Sacuudiga oo dib u furtay safaaradeedii Soomaaliya . | HalQaran.com
Home Wararka Maanta Sacuudiga oo dib u furtay safaaradeedii Soomaaliya .
Sacuudiga oo dib u furtay safaaradeedii Soomaaliya .
Muqdisho(Halqaran.com) –Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Boqortooyada Sacuudi Carabiya ayaa ku dhawaaqday in dib loo furay Safaaradda Boqortooyada Sacuudiga ee Soomaaliya.
Wasaaraddu waxay sheegtay in ay ka mahadcelineyso dadaalka dowladda Soomaaliya ee fududeynta dib u furista safaaradda Boqortooyada Sacuudiga ee Muqdisho ‘taas oo xaqiijinaysa xiriirka qotada dheer ee labada dal.
Wasiirka arrimaha debadda ee Sacuudiga waxaa sido kale ay sheegtay in dib u furista safaaradda ay door muuqda ka qaadaneyso xoojinta xiriirka labada dowladood iyo kor u qaadista wada shaqeynta labada dal.
Wafdi ka socda Sacuudiga ayaa bishii June booqasho ku yimid Soomaaliya, iyagoo ka wada hadlay u diyaar garowga furitaanka safaaradda oo muddo sanado ah ka shaqeyneysay dalka deriska la ah ee Kenya.